Tsy niandriandry ny fokonolona fa niara-nientana nanao biraon’ny zandary tao Antsampandrano, Kianjasoa, kaominina Ambohibary , distrikan’Antsirabe II. Ny zoma teo no notokanan’ny lefitry ny kaomandin’ny Vondron-tobim-paritry ny zandarimaria Antsirabe sy ny lehiben’ny Tobim-paritry ny zandarimaria Antsirabe, ary ny Ben’ny tanàna Ambohibary izany, izay nandanian’ny fokonolona mondron-kery hatramin’ny 4.500.000 Ariary. Nisy fanafihan-jiolahy am-polony maro nirongo fitaovam-piadiana teo an-toerana, ny alin’ny 24 febroary teo. Voatafika koa ny fiara nandalo tamin’iny lalam-pirenena faha-43 iny. Maro ny zavatra voaroba, nisy koa ny naratran’ny famaky sy ny lefona. Nanomboka teo dia nasiana « poste fixe » teo an-toerana ary izao nahazo biraon’ny zandary. Manana andraikitra manome vaovao amin’ny zandary sy miaro tena koa ny isan-tanàna, raha ny fampitam-baovaon’ny
zandary tamin’io zoma io. Azo antoka fa hifindra any an-kafa indray ny jiolahy izay efa tokony hanorenana “poste fixe”.